トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Izici - ukubona ngokusebenzisa indlela Horukon Lesisemkhatsini kulungiselelwa isikhathi
Ngo Horukon bamba, bekungenxa bakwazi usethe ibhola no- Horukon. Phakathi kwabo, ukufakwa okusezingeni eliphezulu, kulungiselelwa Lesisemkhatsini, ukuthi ephansi isethi nezinhlobo ezintathu abakhona. Ngo, e isethi phakathi, singathanda ukuthi kwenzekani ukubheka okuyokwenzeka. isethi Lesisemkhatsini
Horukon bekulokhu kunzima kakhulu ukubona ngokusebenzisa 3 izinhlobo izilungiselelo.
Njengoba isizathu, lezi zinto ngoba ukunyakaza efana isethi okusezingeni eliphezulu ngesikhathi kungabonwa. Ngokwesibonelo, e-high-isethi, kodwa ingabe ukuthi kukhona umuzwa ukuthi ibhola ukusivumela isiqalo, kunjalo izinto ezifana okufanayo futhi phakathi lapho kulungiselelwa kwenzeka.
futhi, futhi izenzakalo kuba nzima ukunciphisa ibhola ugqoko engenhla, nakho sekuyingxenye ne kwenzeke phakathi isethi mkhuba ivame emgwaqweni nge. Iqiniso okungukuthi, umehluko phakathi kulungiselelwa okusezingeni eliphezulu kanye nesibekandzaba Lesisemkhatsini, ufika khona neqiniso lokuthi akuyona likhulu kakhulu.
Nokho, sithanda kukhona indawo lapho ezahlukene esimweni ephakeme i setting Lesisemkhatsini.
ke, Kubonakala yokuthi isibalo givin jackpot lihlukile. Endabeni kulungiselelwa okusezingeni eliphezulu, ngaphakathi eqenjini, okuyinto wakhethwa ngo isinqumo iqembu, kodwa kuye kwaba big hit kwenzeka ngemva kwenye, esimweni izilungiselelo Lesisemkhatsini, futhi eqenjini ngokuwina, kusukela ezine ngaphakathi amaqembu amahlanu, mayelana eyodwa kuphela izinto okungenzeka zenzeka ukuthi jackpot ayivaliwe.
e mbono, phakathi kwalabo Kucinisekisa Horukon bamba, ngoba kukhona nalabo umbono ihlukile, Angazi okucace ngayo. Njengoba iqiniso lokuthi abanye abantu bangase babe hlobo kwemibono, zama ireferensi njengoba omunye umbono.
kulezi zinkanyezi kuyoba isici ukuthi kungenzeka ukulungiselelwa phakathi.
into enjalo, ngokushaya kuhloswe etafuleni ukuthi kwenzeka njalo, ngisho isethi phakathi kuye kwashiwo kwenzeke ukudweba big hit kusengaphambili.
Nokho, wokubamba usebenzisa Horukon, banemibono ehlukene phakathi kwalabo lokugcizelela lokhu Kuyiqiniso futhi kukhona ngokuvamile futhi icala. Njengoba futhi kancane kulotshiwe mayelana isethi phakathi lapho
net, njll, ngokuyisisekelo ebhekise ukulungiselelwa okusezingeni eliphezulu kanye into isimangaliso esifanayo, kuyoba yokuthi umqondo omuhle ukubheka inombolo noma efana jackpot Ngicabanga.